Adobe Photoshop wuxuu yimaadaa iPad-ka. Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Photoshop-ka buuxa ee iOS | Wararka IPhone
Shalay waxaan kuu sheegnay sida ay ahayd barnaamijka cusub ee Adobe Creative Cloud oo aan ku dari karno kumanaan nooc xarfaha iPhone ama iPad, maantana waxaan kuu keenaynaa (ugu dambayntii) barnaamijka cusub ee Adobe Photoshop ee loogu talagalay ipad-yadayada. Adobe Photoshop wuxuu yimaadaa iPad-ka. Waxaan hadda kala soo bixi kartaa Nooca "buuxa" ee tifaftiraha muuqaalka caanka ah ee iPads-ka. Boodka kadib waxaan kuu sheegeynaa waxa aan kari karno, iyo waxa aanaan awoodin, ku samee Adobe Photoshop cusub ee iPad, imaatinka qalabka tafatirka sawir ee ugu fiican iPad-ka.
Sugitaanku wuu dheeraaday laakiin ugu dambeyn waxaan ku haysannaa Adobe Photoshop iPads-keena, noocaas ah Kaliya wuu la jaan qaadi karaa kiniinka Apple laakiin wuxuu noo ogolaanayaa shaqooyin badan oo aan ku qabno nooca desktop-ka, isku mid ah oo aan ugu isticmaali karno Photoshop-ka Mac-yadayada. Dabcan, weli waxyaabo badan ayaa jira in la arko laakiin waxaan haynaa qaar ka mid ah howlaha ugu badan ee la isticmaalay: waan awoodnaa ku samee lakabyo aan dhammaad lahayn muuqaalkeenna, waxay leeyihiin buraash aad u tiro badan, galiya qoraallada, sawirro jarjaran, ku ciyaaraya waxyaabo hufan iyo gaussian blurs, ku dar filtarrada sawirrada, samee xulashada, iyo xitaa sax ah iyo qaybo ka mid ah sawirkeenna. Dabcan, xoogaa way yartahay marka la barbardhigo codsiyada sida kuwa ka kooban Suugaanta Affinity ee noo oggolaaneysa isdhexgal ku dhow nooca desktop-ka buuxa ee Photoshop.
Si aad uhesho tan cusub Adobe Photoshop-ka iPad-ka waa inaad soo gashaa App Store, Adobe Photoshop oo aan kari karno dku soo dejiso bilaash in kastoo ay lagama maarmaan tahay inaan sanduuqa dhex marno si aan u hawlgalino a Lacagta Adobe Photoshop ee iPad (qiimaha 10,99 euro bishii). Sawir gacmeed sida aan dhahno xoogaa kafeega ah, laakiin taasi shaki la'aan waxay calaamad u tahay bilowga summad sida Adobe ah oo loo keenayo barnaamijyada miisaska caadiga ah ee kumbuyuutarka, barnaamijyo xirfad leh, qalab sida iPad-ka ah. Wanaagsan Adobe, waxaan hubaa in jidkan maanta bilaabanaya aan ku arki doonno barnaamijyada abuurka xirfada weyn iPad-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Adobe Photoshop wuxuu yimaadaa iPad-ka. Hadda waxaad kala soo bixi kartaa Photoshop buuxa oo loogu talagalay macruufka